Koorsooyinka ETABS - Geofumadas
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 4
Koorsadan waxaad awoodi doontaa inaad ku horumariso mashruuc guri oo dhab ah Structural Masonry Walls, adoo adeegsanaya aaladda ugu awoodda badan suuqa ee ETABS 17.0.1 barnaamijyada xisaabinta qaabdhismeedka. Wax kasta oo la xiriira xeerarka ayaa lagu sharaxay: Shuruucda loogu talagalay Naqshadeynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Masoniga Dhismayaasha R-027. iyo kan dambe ayaa la barbardhigi doonaa ...
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 3
Koorsadan waxaad awoodi doontaa inaad ku horumariso mashruuc guri oo dhab ah Structural Masonry Walls, adoo adeegsanaya aaladda ugu awoodda badan suuqa ee xisaabinta qaabdhismeedka. ETABS 17.0.1 Software Wax kasta oo la xiriira xeerarka waxaa si faahfaahsan loogu sharaxay: Shuruucda Naqshadaynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Masoniga Dhismayaasha R-027. kan dambena waxaa lala barbar dhigi doonaa ...
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 2
AulaGEO waxay soo bandhigeysaa koorsadan si loogu diyaariyo mashruuc guri oo dhab ah Structural Masonry Walls, iyadoo la adeegsanaayo aaladda ugu awooda badan suuqa ee nidaamka xisaabinta qaabdhismeedka ETABS 3 Wax kasta oo laxiriira xeerarka waxaa si faahfaahsan loogu sharaxay: Naqshadeynta iyo Qawaaniinta Dhismooyinka ee Dhismayaasha Qaabdhismeedka Masonry R-17.0.1. iyo tan dambe ...
Koorsada Maskax Dhismeedka leh ETABS - Module 1
Koorsadani waxay ka kooban tahay aragti teori iyo horumar wax ku ool ah oo ka mid ah Darbiyada Dhismayaasha Maskaxda. Wax kasta oo la xiriira xeerarka waxaa si faahfaahsan loogu sharxi doonaa: Shuruucda Naqshadeynta iyo Dhismayaasha Dhismayaasha Dhismayaasha Maskaxeed R-027 Tusaalaha ay tilmaameen xeerarka kor lagu soo sheegay ayaa la horumarin doonaa, iyadoo looga dan leeyahay ka-qaybgalaha inuu si qoto dheer u fahmo ...
Koorsada ETABS ee injineernimada qaabdhismeedka - Heerka 2
Koorsooyinka qaabdhismeedka B Koorsooyinka ETABS
Koorsada ETABS ee injineernimada qaabdhismeedka - Heerka 1
Koorsada takhasuska ee injineernimada qaabdhismeedka ee ETABS